I Cyprien Ntaryamira dia mpanao pôlitika lasa filoham-pirenen’i Borondy nandritra ny roa volana, teraka tamin’ny 6 Marsa 1955 tao amin’ny havoanan’i Gitwe, kaomioninan’i Mubimbi, faritanin’i Bujumbura, ary maty nisy namono tamin’ny 6 Avrily 1994 tao Kigali reniovohitr’i Roanda. Filoham-pirenen’i Borondy izay nanomboka tamin’ny 5 Febroary hatramin’ny 6 Avrily 1994 nahafatesany.
1 Injeniera momba ny fambolena
2 Minisitry ny Fambolena
3 Filohan’ny Repoblika
4 Ny nahafatesany
Injeniera momba ny fambolena[hanova | hanova ny fango]
I Cyprien Ntaryamira dia nianatra tamin’ny sekoly ambaratonga voalohany tao Rushubi, izay nifarana tamin’ny taona 1968. Tany Bujumbura izy no nanohy ny fianarany tamin’ny sekoly ambaratonga faharoa. Tamin’ny taona 1972 izy dia nitsoa-ponenana ka nialokaloka tany Roanda ka tao izy no nanohy sekoly ambaratonga faharoa tamin’ny taona 1973 ka hatramin’ny 1976 tany Kigali. Tamin’ny taona 1982 no nahazoany ny diploma maha injeniera momba ny fambolena azy tao Roanda.
Minisitry ny Fambolena[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny volana Marsa 1983 izy vao nody any Borondy mba hiasa ao amin’ny ministeran’ny Fambolena. Tamin’ny taona 1985 izy dia voafonja noho ny antony ara-pôlitika tamin’ny fitondran’i Jean-Baptiste Bagaza. Tamin’ny taona 1986 izy dia lasa mpikambana mpanorina ny antoko Front pour la démocratie du Burundi (FRODEBU), niaraka tamin’i Melchior Ndadaye.
Tamin’ireo fifidianana ara-demôkrasia voalohany tao Borondy tamin’ny 1993 dia nandresy ny Union pour le progrès national (UPRONA) ny FRODEBU antoko misy azy izay nahazo 64 % (raha nahazo 32 % ny UPRONA). Voatendry no minisitry ny Fambolena i Cyprien Ntaryamira tao amin’ny governematan’i Sylvie Kinigi, raha i Melchior Ndadaye no filoham-pirenena.
Filohan’ny Repoblika[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny 5 Febroary izy no lasa filohan’ny Repoblikan’i Borondy nandimby an’i Sylvie Kinigi.
Tamin’ny 6 Avrily 1994 dia nandray anjara tamin’ny fifanaraham-pandriampahalemana tao Arusha tany Tanzania izy mba hampitsaharana ny ady an-trano tao Borondy izay nanomboka iray taona talohan’io vokatry ny famonoan’olona ny filoha Melchior Ndadaye mandritra ny fanonganam-panjakana. Ny fiaramanidina mpitondra azy dia mbola an-dalam-panamboarana, ka ny an’ny filoham-pirenen’i Roanda Juvénal Habyarimana izay hody any Kigali, avy eo mankany Borondy, no nitondra azy. Raha nivonoa hipetraka amin’ny tany tao amin’ny seranam-piaramanidina ao Kigali ilay fiaramanidia dia nisy nitifitra tamin’y misily ka maty tamin’izany ireo filoham-pirenena roalahy. Nipoaka taorian’io ny fandripahana totsy tany Roanda.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyprien_Ntaryamira&oldid=996827"
Voaova farany tamin'ny 7 Septambra 2020 amin'ny 12:05 ity pejy ity.